Konke okufuna ukukuva ukuze uqonde iNkosana yayiGenius - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Konke oku kufuneka ukukuva ukuze uqonde iNkosana yayinguGenius
Konke oku kufuneka ukukuva ukuze uqonde iNkosana yayinguGenius
INkosana yenza eSuper Bowl XLI.UJonathan Daniel / Getty Izithombe
Ndiqale ukubhala inguqulelo yoku ngoDisemba 2009 webhlog endala endandinayo. Isikhumbuzo sonyaka omnye sokufa kwePrince sayizisa engqondweni kwaye kubonakala kufaneleke ngakumbi kunokuba ndiqala ukuyibhala.
Ngaba uyibonile le vidiyo? Sele idlulile kwiwebhu okwethutyana ngoku. Hlala nayo de ubone iPrince solo ukuya esiphelweni sengoma.
UMarc Mann kwaye unetalente ngokwaneleyo ukuba ukhethwe njenge-sideman / iseshoni isiginci sikaLynne noGeorge Harrison kwiindawo ezahlukeneyo.
Ngoku, ubukele kwaye unokucinga, upholile, ubethelela ukugoba, amanqaku, isoyolo yoqobo. Inxalenye yeClapton yayingaphezulu kokucula wedwa; Lwalulungelelwaniso olupheleleyo lwamalungu egitare. Kodwa ke, lathi lakufika ixesha lokuba eyedwa, uMnu Mann — ndiqinisekile ukuba uyakwazi ukubetha yedwa nesingoma sakhe - wenza ukhetho oluhloniphekileyo lokudlala indawo ezabekwa nguClapton. Kulungile ngokupheleleyo, ukuba kuyalityalwa. Kwaye akuyomfuneko.
Emva koko uyaphawula iNkosana eneziqhwala edlala ecaleni kwicala lasekhohlo. Kodwa ubonakala ngathi umpu ulayishiwe onesixhobo sokuvula iinwele. Kwaye ngokuqinisekileyo, ujikeleze uphawu lwe-3: 25, ubona uDhani-ongafanelekanga ukuba adlale umdlalo we-poker (thatha umntu owaziyo) -ngakwazi ukuvala intsini; unombono wento ezayo.
Ngokuqinisekileyo, ukucula yedwa, ingoma, mhlawumbi ubusuku bonke bujikwa kwiNkosana, ethe kule minyaka imbalwa idlulileyo (kum) yenze ingxoxo yokuba ngoyena mdlali ukhokela kwikatala ukusukela kuHendrix. Uyindlalifa yokwenene UJimi Hendrix .
Njengoko sonke sisazi, uHendrix waguqula umdlalo wokudlala ikatala. Kwaye wenza njalo ngaphandle kwesibonelelo senkqubela phambili yezobuchwephesha eyenziweyo ukusukela ekufeni kwakhe, izinto ezinje ngokulungelelana okuthe kratya kokugqwetha kunye nezinye izixhobo ezenzelwe ukubamba uhlobo lwempendulo kunye nokugcina uJimi, uPete Townshend, et. al. kuye kwanyanzeleka ukuba baphinde basebenzise ulawulo lwevolumu kunye neebhokisi zangaphambi kokugqwetha ngaphambi kokuba isiginali yabo ifikelele kwityhubhu ehlekisayo (ivalve) iMarshall kunye neHiwatt amps.
Ke iNkosana inenzuzo yezixhobo ezimbalwa ngakumbi zokusebenzisa ulawulo oluthe kratya, kodwa ayinamsebenzi kangako. Yintoni eyenze ukuba ukudlala kukaHendrix kucace gca yindlela awayibeka ngayo yonke loo nto phaya, esenza ngaphandle komnatha, ethatha amathuba okuba kuthathwe kuphela abafana be-jazz kunye ne-post-bop jazz, kwaye esenza njalo ngevolumu enkulu, ukuze naye abe nefuthe kakhulu phambili-ukucinga kweekati ze-jazz njengoMiles Davis.
Apha, kwintsebenzo enye, iNkosana iza njengebhombu yeatom kunye nenqanaba lendawo, itshabalalisa yonke into esendleleni yayo. Usebenza kwinqanaba elipheleleyo.
Ngokuya phaya ungakhathaleli siko, kwii-solos zentsusa, kodwa uphume nje ngokulula ukutshiza yona, ibeka isitampu sayo kwingoma, ayikhanyisi kuphela uguquko olungenantsingiselo; ukhupha eyona ngoma intle kwaye ayise kwindawo entsha ngokupheleleyo ngelixa eshiya lonke iqela ukugcina unyawo olunye kwasekuqaleni. Ngaba ikhona enye indlela engcono yokuhlawula ngokwenyani ingoma yengoma, umbhali wayo, kunye nezithuba zomqondiso wokuqala zikaClapton ezalatha indlela eya kubuchule bayo? INkosana.Ifoto nguKristian Dowling / Getty Izithombe zeLotusflow3r.com
Ngelixa iqela liphela, abantu abadala, lonke uhlobo lokulala kwaye beludlala lupholile, begcina ingoma isezantsi-ukuya kwinqanaba lokugcina yonke indawo yezwi elixhasayo (jonga kuni nonke… weeeeeee -Ubuso bukaDhani buyakhanya. Ujonge ujonge abanye abantu ngohlobo lokuba ungakholelwa njani kule nto ?! intetho, ngethemba lokudibana kwamehlo kwaye ufumane ukwamkelwa kunye nomthendeleko womculo.
Kubonakala ngathi akafumani mpendulo kwiidinosaurs ezindala. UDhani wethu-no-George-bema-ngaphakathi kunye nabameli. Ulapho ukubonisa into esivakalelwa ngayo ehleli ekhaya: Umama Ongcwele kaThixo! Ngaba ayisiyiyo enye yezona virtuoso zibalaseleyo zekatala kwisibini esadlulayo ?!
UDhani ucatshulwe kule ndawo yabalandeli beBeatles, uHarrison uqukumbela ngokuchaza ukuba akawuthandi umculo otsala amanqindi. 'Zonke iirekhodi endizithandayo zinzima. UBob Dylan yeyona nto ilukhuni esisiseko. Umoya upholile, kodwa baziimvumi ezinzima. U-Srinivas sisidlakudla esivela eMadras. Ukukhokela? Wabulala umntu! Kwanele ngoku! '
Andikaze ndibengumlandeli omkhulu webhola yomnyazi, kodwa enye ye-analogies ethi qatha engqondweni yile yeqela eliphakathi ngokugqibeleleyo lezinto zokuguga ngesiquphe spiked kunye noMichael Jordan oselula okanye uLeBron James; i-superstar evula umdlalo ukuya kumboniso; umntu ohleli kamnandi kulusu lwakhe, ubukho beZen ngalo mzuzu kunye nokungabikho kwengcinga engaphandle kunye nokuqikelela okwesibini ukuba baphakame ngaphezu kwabo bonke abanye abadlali, kodwa baphakamise iqela liphela liye kwinqanaba elitsha ngexesha elinye .
Ngokuqinisekileyo bakhona abanye abadlali abanomona nengqumbo. Kodwa ke kukho abadlali abanjengoDhani, abadlala ngaphandle kwe-ego kwaye baxabise nje ukubakho kobukhulu.
Kulungile, abanye (mhlawumbi abanye babafana abaseqongeni) banokuncipha koku kwaye babone iNkosana njengendawo yokubonisa. Kwaye indlela uPrince asandula ukuphuma ngayo emva kokuba ikatala yakhe ebonakala ngathi ibambekile ngaphambili inyuka nje kwaye inyamalale ngaphezulu kweqonga ngokuqinisekileyo ibonisa uhlobo olufanayo lokuzikhukhumeza oluboniswe yiJordani xa wayeza kubhekisa kubalingane bakhe njengeqela lam elixhasayo. Kodwa kweJordani, ibhola yayikukukhulisa nje kwezandla zakhe kwaye wayeyinkundla yonke. KwiNkosana, yigitare kunye neqonga. Akaqambi oosol ngaphambi kokuba abadlale; konke kungumsinga omnye ongenangqondo. Ubethelele ngaphakathi. Ezi zezona zikhulu. Kwaye wenza ingxoxo ekholisayo apha yokuba angangoyena mkhulu.
Abanye banokuthi, Ukuncama! Ngokuzonwabisa nge-solo yokuqala kaClapton, njengamaxesha amadala abebukele kwaye enqula uBob Cousy banokuthi umdlalo kufuneka ube malunga nokudlula kunye nokuseta iifoto. Kwaye ndingavuma ukuba ii-solos zikaClapton zilungile kwingoma: ukulila, ukusetyenziswa okumnandi kwemitya yokugoba njengemiboniso yosizi. Kodwa sele yenziwe. Ukurekhodwa kungaphezulu kweminyaka engama-40 kwaye kudlalwe kwenye indawo yonke imihla yaloo minyaka ilandelayo. Ngoku uGeorge akasekho, kwaye nehlabathi lidinga ukutshayelwa. UGeorge ucule, ngokuchasene nethemba, ngazo zonke iimpazamo kufuneka sifunde. INkosana yimpendulo yelixesha langoku.
Ke iNkosana ithatha indawo apho uClapton noHarrison beyeke khona, batshintsha ukukhala kukutshixiza kwamazinyo, ukugcuma, ukungxola kunye nomsindo. Usebenza ngaphandle koloyiko, nangona, ngaphandle komnatha, njengoko wayeqhubeka esenza nakwimidlalo yodumo SNL kwiminyaka embalwa kamva, yengoma yomsindo.
Bonke abanye bebhendi kufuneka ukuba babelukhuphile nothuli. Kodwa ngabafana nje abanxibe iisuti abadlala abanye abafana abadala ngeesuti; eyona nto iphambili kwiLitye kunye neRoll Hall yoDumo; ngobukho bayo, i-HOF yenza umculo obalulekileyo. Amaqhekeza amaqhekeza anendawo yawo kumnombo. Ngokuphikisanayo, yindawo ebinobunzima bokwenza indawo kumntu onje iNkosana, ongafuniyo ukwahlulahlula ngokwamacandelo.
Umsebenzi uvela ngo-2004, unyaka apho iNkosana noGeorge (emva kokufa, njengomculi wedwa) bangeniswa kwiHolo. Ivakala ngathi iNkosana iphumile ukubonisa ukuba ingangxolisa nawuphi na umculi we-rock othe tye. Uyindlalifa efanelekileyo yengubo yeHendrix. Ndikhetha yena kunoStevie Ray. Undivile. Nawuphi na umhla weveki.
Ndicinga ukuba uGeorge angayivuma into entsha ethatha ingoma. Uninzi, ukuba alunjalo, iingoma zakhe zazinesazela sokucinga kwaseMpuma. I-LSD kunye neMaharishi yamvusa embindini we-'60s kwaye waqhubeka nokufundisa: Zonke izinto zimele ukudlula; Ngaba akulusizi / ngoku, akuyiyo ihlazo / Njani / siphula iintliziyo zomnye nomnye / Kwaye sibangela intlungu omnye komnye / Indlela esithandana ngayo / Singacingi kwakhona / Ukulibala ukubuyisela; Uthando osikelelwe ngalo / Eli hlabathi lilindile / Ke ngoko vumela intliziyo yakho, nceda, nceda / Emva kwalomnyango utshixwayo; Lumkela usizi / Inokukubetha / Inokukwenzakalisa / Yenza buhlungu kwaye yintoni engaphezulu / Ayisiyiyo le nto uzele yona.
Zonke ezi zizishwankathelo zeemfundiso zikaBuddha kunye nezinye izithandi zobulumko zaseMpuma. Bafundise ukuba okuninzi kokungakhathali ehlabathini kubangelwa luloyiko. Ngenxa yoko, uninzi lwethu luhlala ngokuzikhusela amaxesha amaninzi.
UBuddha uthi buyela kumntu wakho wokuqala, owawunguye, ubuso bakho ngaphambi kokuba uzalwe. Yonke into emva koko yongeza kwimaski, ikhaka, uzisola ngokubhekisele kwintlungu kunye nokubandezeleka emhlabeni. Zivulele ngokwakho. Phila okwangoku. Qaphela ukuba silapha ixesha elincinci. Musa ukoyika ukuzenza isidenge. Anditsho ukuba uye kusebenza eofisini yakho unxibe isuti ye-pimp kwaye uphume entlanganisweni emva kokwenza inqaku elikhethekileyo nelinesibindi. Kodwa yiphile kancinci.
Khawuzibuze nje qho emva kwexesha, Ingenza ntoni iNkosana apha?
Ewe, ndiyazi, ngoku konke kubonakala kukubi, Danisa ngokungathi akukho mntu ubukeleyo, nayo yonke loo nto Isobho senkukhu Uhlobo lwekaka. Kodwa kungenxa yokuba iyinyani: Akazixakekisi ngokuzalwa uxakekile esifa, njengoko uBob Dylan wayecula.
Phantse wonke umntu okwelo nqanaba kunye neNkosana badlala ngokuzikhusela. INkosana ixakekile izalwa.
'UMnyama-ish' uMdali waseKenya uBarris uthi iNetflix yaba yi-CBS
Njani uOscar-Utyunjwe nguSufjan Stevens Shapes 'Nditsalele igama lakho'
Ukuqhekeka kweRap ukuziva u-Wap Ukuthetha ngokuThumela imiyalezo uKhanny, iBali emva kwe 'Trap Queen'
Iimveliso ze-CBD zisathengiswa eAmazon ngaphandle kwePlatform's Ban
Eyona mveliso ye-cbd yoxinzelelo
iqala nini izinto zasemzini 2
yiya kutata ovinjelwe isuperbowl yorhwebo
intombi yaseburhulumenteni ibeka i-2019
I-cbd cream yokuthomalalisa iintlungu
uphume waphi unyaka ukutyumka kweelekese